भाइमसलामा महंगी : व्यापारीको लुट कि तिहारले ल्याएको महंगी ? – Mission Khabar
भाइमसलामा महंगी : व्यापारीको लुट कि तिहारले ल्याएको महंगी ?
काठमाडौं– भाइमसलाको नामले चिनिने ओखर, काजु, पेस्ता, नरिवल, मिश्री, बदाम, खजुर, छोकडा, किसमिसको मुल्य तिहार नजिकिदै गर्दा ह्वात्तै बढेको छ । २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म मुल्यबृद्धि भएको भाइमसलाले तिहारलाई नै महंगो बनाएको छ ।
दिदिबहिनीले दाजुभाईलाई भाईटिकाको दिन सगुनस्वरुप भाइमसला दिने प्रचलनले व्यापारिलाई लुटको छुट मिलिरहेको छ । गतबर्षको तिहारमा दैनिक १ लाख ५० हजारसम्म व्यापार भएको भाइमसला यसबर्ष महंगी बढेसँगै दैनिक ४० देखि ५० हजारमा झरेको छ । अहिले बजारमा काजु प्रतिकेजी १७ सय, ओखर ७ सयदेखि ८सय, छोकडा २ सय, किसमिस ७ सय, पेश्ता १८ सय, विदेशी बदाम १५ सय रुपयाँ प्रतिकेजी बिक्री भैरहेको छ ।
नरीवलको मुल्य प्रतिकेजी ५ सयदेखि ६ सय, मिश्री प्रतिकेजी १ सय ६० देखि २०० सम्म विक्री भैरहेको छ । गतबर्ष भन्दा किसमिसमा २ सय ५०, सुकमेलमा ७ सयदेखि १ हजार दुई सयसम्म, बदाममा २ सय र पेस्तामा ५ सय रुपैयाँको मूल्यवृद्धि थपिएको छ । नरिवलमा १ सय ७५, मखनामा ७ सय, खुरपानीमा ३ सय र ओखरमा २ सय रुपैयाँसम्म महंगी थपिएको छ । सुकुमेलको मूल्य गत वर्ष प्रतिकेजी १६ सय रुपैयाँ र ल्वाङको मूल्य गतबर्ष प्रतिकेजी १२ सय ७५ रुपैयाँ थियो ।
नेपालमा चीन, भारत, बेलायत, इटाली, अमेरिका, यूएई, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड मलेसिया, भियतनाम, पाकिस्तान, कतारकबाट मसला आयात हुदै आएको छ । ड्राइफिुडको खपत उच्च हुने तिहार आयातमा निर्भर रहने कारणले पनि निरन्तर मुल्यबृद्धिको मारमा पर्ने गरेको अर्थक्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । यति मात्रै नभई मौकामा टन्न कमउँ भन्ने व्यपारिको मानसिकताले पनि भाइमसला महंगीने गरेको छ ।